အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မောင့်အတွက် .....
ဒီတခါတော့ တနေ့က မောင့်အတွက် စိတ်လိုလက်ရ ချက်ပေးတဲ့ ဟင်းလေးတွေ တင်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က ဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲတော့ မသိဘူး .....အော် မှတ်မိပြီ မောင် သိပ်နေမကောင်းလို့ အဲ့တာနဲ့ မောင် ကြိုက်တဲ့ ဟင်းလေးတွေ ချက်ပေးမယ် လို့ စဉ်းစားမိတာ။ များသောအားဖြင့် အိမ်မှာက မောင်ပဲ ချက်တာ ဆေးတာ လျှော်
တော့ အိမ်မှာလဲ ဝယ်လာတဲ့ ဝက်သား တောက်တောက်စင်းတွေရှိနေတာနဲ့ မုန်ညှင်းချဉ် ရှာတော့ အိမ်မှာ အသင့် ရှိတာက မုန့်ညှင်းချဉ် အချိုချဉ်ဖြစ်နေတယ်။ ရှမ်းမုန်ညှင်းချဉ်က အချိုနဲ့အချဉ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အမှန်က ဝက်သား နဲ့ ကြော်မယ်ဆိုရင်တော့ အချဉ်က ပိုကောင်းပါတယ်။ သို့သော် အိမ်မှာ ရှိတာပဲပေါ့နော်။ အရင်ကလဲအမေကြော် တာကို တခါတင်ဖူးပါတယ်။ ဒီမှာ ပါ။ ခုတော့ ဟင်းချက် ဘလောခ် အတွက် ပိုစ့်တွေ ပြန် အော်ဂနိုက်ဇ် လုပ်နေရ တာနဲ့ ပြန်တင်လိုက်တယ်နော်။ ကဲ ချက်မယ့် ဟာတွေကို ကြည့်ရအောင်....
နောက်ထပ်လိုမှာကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ နည်းနည်းပါ ဓါးပြားရိုက်ရင် ရိုက်ထား မဟုတ်ရင်လဲ စိတ်စိတ်လေး လှီး ထားပါ။ ကဲပြင်စရာရှိတာတွေပြင်ထားပြီးရင်တော့ ကြော်ပါမယ်။ စလိုက်ကြရအောင်နော်....
Posted by တီချမ်း at 2:21 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အတို့အမြုပ်, အရွက်ကြော်, အသားကြော်
ခရစ္စတလ် February 26, 2012 at 3:22 PM
ဝက်သားတောက်တောက်စင်းပုံကို ထမနဲအောက်မေ့လို့ လာငမ်းတာ :(
Anonymous May 10, 2012 at 1:17 PM
အခုမှ လာကြည့်ဖြစ်တာ .. အစုံပဲနော်. ..တီတီချမ်းက :)
Anonymous February 26, 2012 at 3:51 PM
Facebook account ရှိလား။ရှိရင်ပြောပြပါလား။ ကျွန်တော် add ပါရစေ။
billionchan Chan Nyein (ချမ်းငြိမ်းထွန်း)။ဆိုတာကျွန်တော့ facebook account ပါ။
တီချမ်း February 26, 2012 at 4:39 PM
yes it does looks like hta ma nae'
ano 1) thanks i will also try shushi coz i also like it will ask my sister in japan and so some OK
ano 2) thanks for visiting
i do have FB account but NOT active cheers
မောင်မောင် February 26, 2012 at 6:55 PM
မသေချာမှာ စိုးလို့ ၂ခေါက်ပြန်ဖတ်တာ သေချာသွားပြီ...
၀က်သားစဉ်းကောထဲ့ပြီး မုံညှင်းချဉ်ထဲ့တာ မပါသေးဘူး တီချမ်း..
နောက်ပြီး ငြုတ်သီးခြောက်က ဆီပူရင် မွှေးလာတာမဟုတ်ဘူး
တီချမ်း February 26, 2012 at 11:07 PM
ငရုတ်သီးက မွှေးလာရင် ကျန်တာ ထည့်တော့လေ တူးတဲ့ အထိမစောင့်နဲ့ ဟုတ်ပလား
မောင်က အဲ့နေ့ကတည်းက တီချက်တာစား ပီတီတွေပွားပြီး နေကောင်းသွားပြီ
Thanks for your 'Bate Chin' recipe. I'll try it.
Yin February 27, 2012 at 9:35 AM
သိင်္ဂါကျော် February 28, 2012 at 3:37 AM
Hormiga March 6, 2012 at 12:40 AM
Hormiga March 6, 2012 at 12:46 AM
Hormiga March 6, 2012 at 1:38 AM
weekend and ဘာဘာညာညာ